Civil 3D, uyilo lwendlela, isifundo 1 -I-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-3D yabasebenzi, isakhiwo seendlela, isifundo se-1
Ndifumana isicelo kumhlobo osebenza kwindlela kwilizwe le-patepluma; kuyabonakala ukuba uneLand Desktop so sizohamba kancinci ngoba into endinayo yile 3D 2008 kodwa yintoni enye? Nje nge-nostalgia, oku bekulula kakhulu kwi-CivilSoft (i-Autocivil ekuqaleni yasebenza ngaphandle kwe-AutoCAD kwaye yenzelwe iifayile ze-DXF), emva koko kwafika iSoftdesk kwaye ngoku i-Civil 3D.
Uvavanyo lohola wendlela, apho kukho umgca we-axis kunye namacandelo anqamlezayo ukuya ngasekhohlo nasekunene kwesikhululo ngasinye kwiimitha ezili-10. Kwesi sifundo siza kubona indlela amanqaku angeniswa ngayo kumazwe angaphandle.
Ekuqaleni bendinedatha yendawo kunye nomgca we-axis, iimbono zasekhohlo nasekunene. Ngandlela ithile ngaphandle kokubuza umntu wamfumanela itemplate entle apho anokufaka khona olo lwazi ngaphandle kokuzoba ngeenyawo. Ngoko ke ndiya kulisusa elo nqanaba, kuba ifayile enamanqaku sele ifika kwiphepha le-Excel workbook.
Phofu apha ndiyahamba ifayile ukuze baphule i-coconut ukuze babone ukuba isebenza njani kwaye siya kugxininisa kumsebenzi ukusuka kwisiseko samanqaku.
Izinto zokuqala kuqala:
Umzobo omtsha. Siza kuqalisa umzobo omtsha, kuba oku senza "ifayile, entsha" kwaye ukhethe itemplate "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS Base.dwt". Oku kukuqinisekisa ukuba ifayile yembewu ikwiyunithi yemetric hayi isiNgesi.
Georeference umzobo. Khumbula ukuba umzobo wethu yi-dwg elula engenalo iprojekti okanye inkqubo yokulungelelanisa, ukwenza oku kunokwenzeka kuphela ngeMephu ye-AutoCAD okanye i-Civil 3D. Ukwenza oku, senza "imephu / izixhobo / sichaza iNkqubo yoLungelelaniso lwehlabathi" okanye ngomyalelo "_ADEDEFCRDSYS"
Ukusuka apho siya kukhetha kwiCandelo, i-UTM WGS84 Datum kwaye emva koko izowuni ye-16 eMantla.
Ngenisa i ngongoma
Ukungenisa amanqaku, ndithumele ngaphandle ifayile ye-Excel, apho itheyibhile yokulungelelanisa ikwifomathi ye-csv ebizwa ngokuba yi-geofumadasxport.csv, apha ungayilanda ukuba bafuna ukuyenza.
Khetha ifomathi. Ngoko ke okuza kulandela ukungenisa okulula kwamanqaku kwi-AutoCAD, kuba oku senza "Amanqaku / Amanqaku okuThumela ngaphandle / Amanqaku okungenisa" okanye ngomyalelo othi "_importpoints" kwaye ukusuka apho sikhetha ifomathi evumelana nathi kakhulu:
Ulandelelwano lwamanqaku lu:
Ngoko sikhetha loo nto, i-PENZD, kunye nefomati ye-comma delimited (csv), sikhetha ifayile kwaye sichaza ukuba onke amanqaku aya kwiqela elithi "sb_todos".
Sebenzisa. Emva koko kulungile kwaye senze umbono owandisiweyo ukubona amanqaku.
Oku bekufanele ukuba kudalwe, umnatha wamanqaku, kwaye kwiphaneli yecala, kwithebhu ethi "prospector", uluhlu lwamanqaku abizwa ngokuba yi "sb_todos" bekufanele ukuba lwenziwe.
Ukuba iphuma njengethambekile, inokuba ubhidanise i-PENZD ne-PNEZD, yicime kwaye uyingenise kwakhona.
Ukuba awufumani ubungakanani obufanayo bombhalo, musa ukuyihoya, ngumbuzo wokufomatha.
Kwicandelo elilandelayo siza kubona indlela yokuhluza amanqaku ukuwajonga ngokwahlukileyo… Ndiyathemba ukuba ndinexesha.
3D civil Dwg egeomates My
Iimephu ezininzi ezindala nezingaqhelekanga
Ukuba ayiveli ngolu hlobo, ungenza ufikelelo oluthe ngqo, ushiye oku kuguquguquka kulandelayo kwindawo ekuyiwa kuyo:
"C: Iifayile zeNkqubo AutoCAD Civil 3D 2011 acad.exe" /ld "C: Iifayile zeNkqubo AutoCAD Civil 3D 20111AecBase.dbx" /p "> ”
kwaye kukhetho lokuqala:
"C: IiFayile zeNkqubo\_AutoCAD Civil 3D 2011\_UserDataCache\_"
okanye umendo wenkqubo yakho
Ungakwenza oko xa uqalisa inkqubo:
Qala, zonke iiNkqubo, i-AutoDesk, i-AutoDesk Civil 3D 2011
Kwaye kubonakala inketho yokuyiqala kwi-metric okanye iiyunithi zesiNgesi.
Molo ngokuhlwa, ndifuna ulwazi olubalulekileyo. Ndine-autocad civil 3d 2011 efakiweyo kwaye andinakufumana indlela yokutshintsha isikali somzobo ukusuka kwi-empiriyali ukuya kwi-metric ukusuka ekuqaleni, ukuze kwisithuba somzekelo unokubona izikali zemetric. Ndiyabulela kwangoko.
Iimoto ezithengiswayo uthi:
enkosi kunjalo ndizohlala ndilindile
qhubeka usiya kwabo bathe iteknoloji isitsalela nangona sele beqeqeshiwe kwixesha lamatye
Umhlobo obulisayo, inceba yokuba isifundo siqaphele emva kwexesha. Kwixesha elizayo siza kukwazisa.
Heyi, enkosi ngamagalelo akho ekungazini kwaye thina, sifuna ukufunda yonke imihla, igalelo lakho lixabisekile, ndiyathemba ukukugcina umkhondo wakho
Molo, unjani? Eyona nto ndiyifumene kwinto yonke. Enkosi ngayo yonke into, ndicela uqhubeke usithumelela ngakumbi.
Umhlohli olungileyo we-3d… undikhuphe engxakini
Bubomi mhlobo uRay, kunzima ukuvana nomntu wonke.
INYANISO YOKUBA UBOMI BUHLANGANISIWE KUBALA KUBALAWULELWA AMACANDELO, KWELINYE INXALENYE LE YAMANQAKU ATHATHWAYO ESAYISEYISISEKO.
IPHEPHA ELIQHELEKILEYO kuzo zonke iinkalo zalo.
Yenye yezinto endizithandayo